Fikarohana momba ny firaisana Fianakaviana teraka tamin'ny fanambadiana sakaizan'ny fianakaviana izay navakavaka toy ny kambana roa: ny fiainan'ny fiainana teo aloha tany Joanna Pollock | Gillian Pollock sy Jacqueline Pollack Jennifer Pollack - Fikarohana momba ny vatana teraka
From: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia, nataon'i Ian Stevenson, MD, pejy 2041-2058
Ny fiainan'i Joanna sy Jacqueline Pollock
John sy Florence Pollock no tompon-trosa ary nitantana orinasa kely fivarotana kely sy tolotra ronono tany Angletera. Teraka tao 1920 tany Bristol, Angletera i John Pollock ary nanatrika ny Fiangonan'i Angletera ny fianakaviany. Nandritra ny fahalavorariana, niaraka tamin'i Florence izy, niaraka tamin'ny Fiangonana Katolika Romana. Nanana zanakavavy roa izy ireo izay namoy ny ainy nandritra ny fahazazany.
Ny zanak'izy ireo voalohany, Joanna, dia teraka tamin'ny volana 25, 1946, raha mbola nipetraka tao an-tanànan'i Bristol ny fianakaviany. Nifindra tany Whickham ny fianakaviana avy eo, ary nanana trano lehibe iray izay nanana zaridaina sy zaridaina. Raha vao 4 taona i Joanna dia nifindra tany amin'ny tanànan'i Hexham ny fianakaviany, izay teraka tamin'ny April 13, 1951, ny zanany vavy faharoa.
Rehefa niasa ireo ray aman-dreny, dia nentin'ny renin'i Florence ireo tovovavy izay niara-nipetraka tamin'ny fianakaviana. Raha nanatitra ronono i Florence, dia nanao satroka manokana mba hiarovana ny akanjony tsy ho lena.
Tena nifandray akaiky i Joanna sy i Jacqueline ary nanao zavatra foana. Joanne, izay 5 taona zokiny noho i Jacqueline, dia nanondro ny "reny" ny zandriny vavy, izay nanaiky ny fitarihan'i Joanne sy ny mpitarika.
Nanasongadina jiro iray teo an-damosiny i Jacqueline
Raha vao 3 taona i Jacqueline dia nianjera izy ary namely ny handriny teo amin'ny sisin'ny siny, izay nahatonga ny fihenan-tsika izay nitaky ny endriky ny 3. Nipoitra ny takaitra iray izay nisy teo amin'ny andriny mahitsy teo akaikin'ny fakan'ny orona. Ity marararama ity dia hitombo kokoa amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Tian'i Joanna ny manoratra sy mamokatra tantara an-tsehatra kely izay hanaovany akanjo hampisehoana ny tantara an-tsehatra. Samy nankafizin'i Joanna sy i Jacqueline ny volon'olon-kafa, indrindra ny volon'ny rainy. Tian'ireo tovovavy ihany koa ny milalao amin'ny savily miorina amin'ny valan-javaboary iray ao Hexam.
Ny rahavavy dia novonoina tamin'ny lalana an-dalàmbe iray nataonà mpihazakazaka
Ny marainan'ny May 5, 1957, ireo tovovavy dia nandeha tany an-tranony nankany amin'ny fiangonany tao Hexam mba hanatrehana ny Sekoly Alahady. Tampoka teo, vehivavy iray no nandroaka ny fiarany teny an-dalantsara izay nandehanan'ireo tovovavy. Nisy rindrina teo amin'ny sisin-dalana izay nanakana ny fitaovana handositra lavitra ny arabe. Namely ireo rahavavy ilay fiara ary namono azy ireo avy hatrany. Joanna dia 11 ary i Jacqueline dia 6 taona fony izy ireo maty.
Taorian'izay dia nianatra fa ny fifamatorana tamin'ny vadiny dia nalain'ny mpamily izay namono ireo tovovavy ireo. Toa nahatsapa ity vehivavy ity fa raha tsy afaka manana ny zanany izy dia tsy misy olon-kafa tokony hanana zanaka. Nigadra tao amin'ny hopitaly ara-tsaina izy taorian'izay.
Taorian'ny fahafatesan'ny zanany vavy dia nijanona tsy nitondra ronono intsony i Florence ary notahirizina ny smock-ny. Toy izany koa, ny kilalao sy saribakolin-jazavavy dia napetraka tao anaty boaty fitehirizana.
Ry rahavavy isankarazany, miala sasatra toy ny zazavavy kely
Mbola bevohoka indray i Florence tany am-piandohan'ny 1958. Tamin'ny fahatongavan'ilay vehivavy bevohoka, na dia teo aza ny fiheverany kristianina, dia azon'i John antoka fa hanana kambana i Florence ary haverina aminy ireo zanak'izy ireo maty. Nanamafy ny dokotera Florence fa hanan-janaka iray izy, fa tsy kambana. Tsy nino ny fitsanganana indray ny vatana vaovao i Florence ary nandroaka ny finoany ny vadin'i Joanne sy Jacqueline mba hamerina indray ny fianakaviany.
Na izany aza, ny Oktobra 4, 1958, herintaona sy tapany taorian 'ny namonoana ny zanany vavy, dia nanana tovovavy roa mitovy aminy i Florence, izay nantsoina hoe Gilliam sy Jennifer. Teraka tany Hexam izy ireo. Ny roa tamin'ireo tovovavy dia manana molekely matevina sy matevina eo amin'ny havia havia, eo ambonin'ny hip, izay azo hazavaina amin'ny makia mitovy aminy.
Fiainam-piainana taloha: Jennifer dia nanana marika nahaterahana teo amin'ilay toerana iray ihany, toy ny fehiloha alohan'i Jacqueline
Jennifer koa dia manana mari-pamokarana eo amin'ny lohany mahitsy eo amin'ny fakany ny orony, toerana iray izay nahatonga an'i Jacqueline nanenitra ny lohany rehefa namely ny siny ny lohany. Gilliam dia tsy nanan-tarehy teo amin'ny lohany. Noho izany, tsy azo hazavaina amin'ny alalan'ny génétique ny marika famantarana ny fahitan'ny lohan'i Jennifer. Tahaka an'i Jacqueline, ny mararin'i Jennifer dia hita mibaribary kokoa amin'ny toetr'andro mangatsiaka. Noho io zandriny io teo amin'ny lohany, dia nieritreritra fa mety ho ny fanambadiana indray ny fahasalaman'i Jacqueline i Jennifer.
Raha vao volana 9 ireo kambana dia nifindra monina avy tao Hexam nankany amin'ny tanàna antsoina hoe Whitley Bay. Izany no nahatonga ireo zandriny nihalehibe.
Gilliam dia niaiky ny tantaram-piainan'i Jacqueline taloha
Nanomboka niresaka tamim-pahamendrehana ireo zazavavy tamin'izy telo taona. Tamin'ity taona ity dia nanondro tampoka ny marika nahaterahana teo amin'ny handrin'i Jennifer i Gillian ary nilaza hoe:
"Izany no marika azon'i Jennifer rehefa nilatsaka tamin'ny siny izy." Tamin'ny fiainany ankehitriny, Jennifer dia tsy nanana ratra izay afaka hanazava ny dian-tany. Jacqueline kosa nianjera tamin'ny siny ary nahitana ratra teo amin'ny lohany izay nila zaitra ary niafara tamin'ny dian-kapoka tamin'io toerana anatomika io ihany.
Gilliam sy Jennifer dia mamantatra sy mitaky ny poketrany ho an'ny fiainany taloha
Rehefa 3 na 4 taona ireo zaza kambana dia navoakan'i John sy i Florence ilay boaty kilalao izay an'ny zanak'izy ireo efa nodimandry. Nentina nivoaka ireo kilalao ary nandry teo. Tonga dia nitaky saribakoly an'i Joanna i Gillian ary nitaky saribakoly an'i Jacqueline i Jennifer. Hafa mihitsy ireo saribakoly.
Ankoatra izany, nilaza ireo kambana fa nomen'i Santa Clause ny saribakoly azy ireo, ary ny saribakoly dia nomena an'i Joanna sy Jacqueline ho fanomezana ho an'ny Krismasy.
Izany dia nanitatra ny fiheverana fa i Gilliam dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Joanna, zokiny efa nodimandry, ary i Jennifer dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Jennifer, zandriny vavy.
Gilliam dia manaiky ny fiainany taloha momba ny Laundry Wringer
Zavatra iray hafa nesorina tao amin'ilay boaty dia kilalao, mpanodina fanasan-damba kely. Talohan'ny nahatongavan'ireo fitaovana fanontam-batana mandeha amin'ny herinaratra, ny mpisikidy dia nampiasaina mba hisintonana ny rano amin'ny akanjo vita. Ilay mpilalao kilalao dia anisan'ny zokiny vavy Joanna.
Rehefa nahita ny kilalao i Gillian dia niroso avy hatrany izy ary nilaza azy ho azy. Hoy izy: “Jereo! Ao ny mpiambina kilalao. ” Nampiany koa fa ity mpanao kilalao kilalao ity dia fanomezana Krismasy ihany koa, izay marina ho an'ny fiainan'i Joanna.
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha: Ireo zana-trondro dia mahatsiaro ny fitohanana any anaty valan-javaboary iray any Hexam sy ny loza niainany taloha teo amin'ny fiainana
John Pollack dia nanambara fa fony ireo kambana dia 4 taona, dia niresaka momba ny fifandimbiasana tao amin'ny valan-javaboahary ao Hexam izy ireo. Tadidio fa niala tao Hexam nankany Whitely Bay ny fianakaviany raha vao 9 volana monja ry zareo, ka tsy mahatsiaro ny fiheverana azy ireo amin'ny Hexam amin'ny fomba mahazatra.
Nilaza i Florence fa nandre an'i Gillian sy Jennifer mihoatra noho ny nifampiresahana momba ny loza tsy nampoizina an'i Joanna sy Jacqueline. Florence nanamarika fa rehefa niresaka momba ny loza tsy nampoizina izy ireo, dia toa izao no nitenenan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Nanamarika i John fa rehefa niresaka momba ny loza mahatsiravina izy ireo, dia toa namelombelona azy io.
Nitatitra zava-nitranga iray hafa i Gillian sy Jennifer, izay tao amin'ny trano fatoriana mitatao na maty, akaikin'ny tranon'izy ireo, izay nisy fiara niorina tao. Rehefa niditra ny mpamily ny fiara ary nanomboka ny motera hiverina avy any an-dàlam-be, dia nifamotoana nifanelanelana i Gillian sy Jennifer avy hatrany ary nitifitra teny an-joron-dàlana. Hitan'i John fa toa sahiran-tsaina izy ireo. Ny fiheverana fa nampahatsiahy an'i Joanna ilay zava-nitranga Gilliam sy Jacqueline | Jennifer avy amin'ny lozam-pifamoivoizana niainan'izy ireo, izay tsy ananany fitaovam-piadiana.
Fomba fiaina taloha
Toa manintona ny fitondrantenan'ireo rahavavy efa maty ireo kambana ireo. Ohatra, Gillian sy Jennifer dia tena akaiky, toa an-dry Joanna sy Jacqueline, ary raha nomena fifehezana ny famotsoran-keloka izy ireo, dia nitomany ilay iray hafa.
Ny kambana dia naniry ny hitodika amin'ny renibeny ho an'ny fitarihana sy ny fikarakarana, toy ny nataon'i Joanna sy Jacqueline, izay tsy nety tamin'ny fotoana izay tsy niasan'i Florence intsony ary nanam-potoana bebe kokoa handehanana miaraka amin'ireo zatovovaviny toy izay efa nataony tamin'ny maty ireo.
Faly ireo kambana nanakodia ny volon'olon-kafa, indrindra fa ny rainy, toa an'i Joanna sy Jacqueline. Gillian dia nikarakara ny reny Jennifer ary nanaiky ny fitarihan'i Gillian i Jennifer, toy ny fifandraisan'i Joanna sy Jacqueline
Nanamarika i Florence fa ireo zanany vavy efa nodimandry, Joanna sy Jaqueline, dia tsy niraharaha ny fiampitana arabe. Mifanohitra amin'izany kosa, i Gillian sy i Jennifer dia nitandrina tsara tamin'ireny toe-javatra ireny. Nijanona izy ireo ary nihazona ny tanan'ny reniny rehefa niampita ny arabe. Nihevitra i Florence fa ireo kambana dia nanana tahotra mafy kokoa hanatona fiara noho ny ankizy hafa amin'ny taonany.
Gillian koa dia naneho fahalianana tamin'ny fanaovana zavatra ary tia mampiasa akanjom-bolo, toa an'i Joanna.
Hevitry ny jeografia: Ny twins dia mahalala ny toerana misy ny fiainana andavanandro sy ny swing
Rehefa feno 4 taona ny zaza kambana dia nanao dia lavitra ny fianakaviana avy tany Whther Bay nankany Hexam, ilay tanàna taloha. Raha nandeha teny amin'ny làlana mankamin'ny valan-javaboary izy ireo, na dia mbola tsy tazana aza ilay valan-javaboary, dia nilaza i Gillian sy Jennifer fa te-hiampita arabe hankany amin'ny valan-javaboary sy hilalao ny savily. Gaga i John sy i Florence tamin'ity fanambarana momba ny kambana ity, satria tsy afaka nahafantatra momba ilay valan-javaboary niaraka tamin'ny swing izy ireo satria tsy mbola teo izy ireo. 9 volana ireo zaza kambana ireo rehefa nifindra avy tany Hexan ny fianakaviana, ka tsy nanana fotoana nilalaovana tao amin'ny valan-javaboary izy ireo. Toa nahatadidy zava-nitranga tamin'ny fiainan'ireo tovovavy maty ireo kambana.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Niaiky i Jennifer fa ny trosin'i Florence dia niforona talohan'ny nahafatesan'ny anabavy
Fony 4 taona sy sasany ny zaza kambana, dia niomana ny hanao sary hosodoko ny tranony i John Pollock rainy. Nesorin'i John avy eo amin'ny fitehirizana ilay smock izay nampiasain'i Florence tamin'ny orinasan-dronono nomen'izy ireo azy, mba hiarovana ny akanjony tsy ho voaloto amin'ny loko. I Jennifer, ilay kambana faralahy, nahita azy teo am-pamoloana, dia nilaza hoe:
Rehefa toa tsy nahalala ilay smock i Gillian, ilay kambana zokiny, dia sosotra tamin'ny rahavaviny i Jennifer. Ny tsy faneken'i Gillian ilay smock dia azo hazavaina toy ny tamin'ny fiainan'i Gilliam taloha toa an'i Joanna, mety ho tany an-tsekoly izy rehefa nody avy niasa ny reniny ary nanala ilay smock. Raha izany dia tsy dia fahita matetika i Joanna mahita ny fofon-dreniny.
Mifanohitra amin'izany, i Jacqueline, fony izy mbola kely, dia mbola tao an-trano ary nokarakarain'ny renibeny reniny rehefa nody avy any am-piasana i Florence.
Rehefa nandre an'i Jennifer niteny i John fa ny reniny dia ny reniny, dia nanontaniany ny fomba nahafantarany izany. Nilaza i Jennifer fa ny reniny dia nitafy ny toaka rehefa namatsy ronono, izay marina.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Tsaroan'ny roa taona ny fisakafoanana tany Hexam
Rehefa feno enin-taona ireo kambana, dia nitaraina momba ny sakafo izay natokan'i Florence ho azy ireo tamin'ny sakafo antoandro. Nanaiky i Florence avy eo fa raha tsy tia ny sakafo any an-trano izy ireo, dia mety afaka misakafo any am-pianarany.
Namaly ireo kambana hoe: “Efa nanao an'io isika taloha.” Rehefa nanontany i Florence hoe aiza no nisakafoanana an-tsekoly tany an-tsekoly dia namaly tao amin'ny Hexam ireo zaza kambana. Nihaika azy ireo i Florence tamin'ny filazany fa mbola tsy nianatra tany Hexam mihitsy izy ireo, satria nihalehibe tao Whitley Bay ireo kambana. Na izany aza, nanamafy ny kambana fa tokony hisakafo atoandro ao amin'ny sekoly ao Hexam izy ireo, izay mety ho an'ireo rahavavy maty.
Ao amin'ny Adulthood, Gilliam Manoritsoritra ny fiainany taloha tany Whickham
Tamin'ny 1981, rehefa 23 taona i Gillian, dia nilazalaza tamin'i John rainy ny fahitany anaty iray izay nitantara ny filalaovany amina fasika iray tao amin'ny zaridainan'ilay trano mitokana be. Nanome famaritana amin'ny an-tsipiriany momba ny trano sy ny zaridaina, ny bozaka ary ny zaridaina izy. Ity famaritana ity dia nanoritsoritra trano iray izay nipetrahan'ny fianakaviana tao Whickham. Tadidio fa nandao ity trano ity tany Whickham ny fianakaviana rehefa 4 taona i Joanne zanakavavy maty.
Gillian dia nino fa niaina tao amin'ity trano ity fony izy zazakely, saingy niezaka nanazava taminy ny rainy fa tsy mbola niaina tao amin'ny trano Whickham tao amin'ny fiainany ankehitriny izy. Na dia ara-lojika aza, tokony takatr'i Gilliam izany ho toy ny fahatsiarovana ny fiainany taloha tamin'ny fiainany toa an'i Joanne, sarotra taminy ny nahatakatra izany.
Ny Pollocks dia nandao ny fiangonana katolika romana noho ny fankahalan'ny paroasy mankany amin'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Rehefa navoaka tao amin'ny gazety sy gazety tao amin'ny 1960 ireo zava-nitranga tamin'ny roa ambin'ny folo teo aloha, dia nahazo taratasy mahatsiravina avy amin'ireo mpiangona ao amin'ny fiangonany i John sy Florence Pollack, izay nandà ny foto-kevitry ny vatana vaovao indray. Vokatr'izany dia nandao ny Eglizy Katolika i John sy Florence.
Na dia i Florence aza, tamin'ny fotoana nahaterahan'ny kambana dia nandà ny toe-piainana nampitain'i John fa ny zanany dia ny fanorenana indray ireo zanakavavy efa maty, mifototra amin'ireo fanambarana nataon'ireo kambana, dia nanaiky izy fa ireo kambana ireo dia ny fiverenan'i Joanna sy Jacqueline.
Ireo Fitsipiky ny Firaisam-behivavy indray mandeha monja - Porofon'ny fiainana taloha
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ny rahavavy Joanna sy Jacqueline dia niorina tamin'ny ray aman-dreniny ho toy ny kambana mitovy aminy Gillian sy Jennifer Pollock.
Ian Stevenson, MD ao amin'ny Oniversiten'i Virginia dia nanangona tranga momba ny zaza teraka 31 izay misy kambana. Ao amin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ireo kambana ireo dia nanana fifandraisana teo amin'ny fiainana teo aloha, ary mampiseho amin'ny fomba mampivelatra fa ny fanahy dia mamolavola ny fiainana ho tafaraka amin'ireo izay tiantsika. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
Fiainana ela velona: Nanana mari-pamokarana teo amin'ny handriny i Jennifer teo akaikin'ny fototry ny orony izay tao anatin'ilay toerana anatomika izay nahitana an'i Jacqueline nateraky ny nahaterahany rehefa nianjera tao anaty siny. Nanjary nalaza kokoa ny hafatr'i Jennifer sy Jacqueline tamin'ny andro mangatsiaka
Fiainana Talenta sy fitondrantena taloha: Nahafinaritra an'i Joanna sy i Gillian ny nanoratra sy namokatra tantara an-tsarimihetsika, nampiasàna akanjo ho an'ny tantara an-tsehatr'izy ireo. Ny fihetsiketseham-pianakavian'i Joanna manoloana ny rahavaviny Jacqueline dia naverina tamin'ny fifandraisana teo amin'i Gillian sy Jennifer.
Fahatsiarovana jeografika: Na dia niala tao Hexam aza ny fianakaviany ka nankany Whitely Bay raha vao 9 volana monja ny kambana, rehefa niverina tany Hexam ny fianakaviany mba hitsidika azy, dia nahafantatra ny toerana misy ny valan-javaboary ny kambana ary nitodika tany amin'izay nalehany teo amin'ny fiainany teo aloha.